MAHAFINY Dassault Falcon 20E FSX & P3D
Ity fonosana ity dia modely polyule ambany ho an'ny fianarana fa tsy seho. Na izany aza, nanandrana ny hanao azy araka izay azo atao ny mpanoratra amin'ny fahalalana sy ny fahaiza-mitantana ankehitriny FSX/P3D fampandrosoana. Mampiasa ny fitsipika izy io FSX/P3D Fampiasana SDK. Jereo ny boky PDF (Fanamarihana Pilot) raha mila fanazavana momba ny antsipirihany.
Ny Dassault Falcon 20 dia fiaramanidina ara-barotra frantsay novokarin'ny Dassault Aviation. Ny fiaramanidina ara-barotra voalohany novolavolain'ny orinasa dia nanjary voalohany ho an'ny fianakavian'ny fiaramanidina ara-barotra novokarina tamin'ny anarana mitovy. Ny Falcon 10 madinika sy ny Falcon 50 somary lehibe kokoa dia ny doka mivantana avy amin'ny Falcon 20. Ny Falcon 20, fantatra amin'ny anarana hoe Dassault-Breguet Mystère 20, dia nankatoavina ny hanohy ny fampandrosoana ny fiaramanidina tamin'ny Desambra 1961. Izy io dia teti-bolan-tsavily marevaka, ampiasain'ny motera turbojet General Electric CF700. Tamin'ny 4 May 1963, nanamboatra ny zotany ny prototype. Ny fiaramanidina voalohany namokatra dia nampidirina tamin'ny 3 June 1965. (Source Wikipedia)
Nohavaozina taminy 26 / 08 / 2019: Version 2.0. Fonosana vaovao misy modely Falcon 20/200 / HU25. Anisan'izany ny mpandeha, entana, ECM MIL, Ady elektronika, fitifirana kendrena, fikarohana atmosfera, fikarohana MIT elektronika, kinova Guardian USCG. Modely 16 samy hafa farafaharatsiny ary loko 23. Jereo ny boky fampianarana sy boky torolàlana PDF (Fanamarihana Pilot) raha mila fanazavana bebe kokoa
Model sy gauge fampandrosoana nataon'i Arild Elverum (Rotorhub). Textures sy modely modely nataon'i Thomas Roehl.